Bangladesh bat; Hamilton Masakadza to lead Zimbabwe – Zimbabwe Daily
Bangladesh bat; Hamilton Masakadza to lead Zimbabwe
ZIMBABWE – An unchanged Bangladesh opted to bat in the second T20I against Zimbabwe in Khulna at the Sheikh Abu Naser Stadium in Khulna, even as the visitors made three changes to their line-up. Hamilton Masakadza was named captain in the absence of Elton Chigumbura who was given a break, while Sikandar Raza and Luke Jongwe sat out as Zimbabwe chose to give the other players in the squad a game with the World T20 in mind.
Wicketkeeper Richmond Mutumbami was picked along with the pace pair of Taurai Muzarabani and Neville Madziva. Tendai Chisoro and Chamu Chibhabha could not find a place in the XI.
Zimbabwe: 1 Vusi Sibanda, 2 Hamilton Masakadza (capt), 3 Peter Moor, 4 Sean Williams, 5 Richmond Mutumbami (wk), 6 Malcolm Waller, 7 Taurai Muzarabani, 8 Neville Madziva, 9 Graeme Cremer, 10 Wellington Masakadza, 11 Brian Vitori
ZIMBABWE - An unchanged Bangladesh opted to bat in the second T20I against Zimbabwe in Khulna at the Sheikh Abu Naser Stadium in Khulna, even as the visitors made three changes to their line-up. Hamilton Masakadza was named captain in the absence of Elton ...